Kongaresska Maraykanka Oo Ka Soo Horjeestey Hindise Sharciyeed Uu Trump Diiday – somalilandtoday.com
Aqalka Senate-ka oo uu maamulo Xisbiga Jamhuuriga ayaa waxa uu yeeshay kulan dhif iyo naadir ah oo ay maalintii koobaad ee sannadka cusub kaga doodeen arrintan, middaas oo ay Aqalka Wakiillada horay ugu soo codeeyeen.
Hindise sharciyeedkan ku kacaya $740 bilyan oo doollar ayaa waxaa lagu maalgelinayaa siyaasadda gaashaandhigga Mareykanka ee sannadka soo socda.
“Halkan waxaa ku cad waxa Senate-ka uu diiradda saaray oo ah in la dhammaystiro sharciga difaaca ee dhowraya ragga iyo dumarka geesiyaaasha ah ee iskood u xidhy dharka milateriga.
“Senate-keenna Jamhuuriga waxa uu lumiyay fursad ay hindise sharciyeedka uga saari lahaayeen qeybta 230, taas oo awood aanan xadidnayn siinaysa shirkadaha tiknolojiyadda ee waa wayn. Waa wax laga xumaado!!!” ayuu Trump ku yidhi qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka.